Fanavaozana Ara-Pinoana ao Ejipta Hahafahan’ireo Vehivavy Mpananatra Hiakatra Ambony Pilipitra · Global Voices teny Malagasy
Fanavaozana Ara-Pinoana ao Ejipta Hahafahan'ireo Vehivavy Mpananatra Hiakatra Ambony Pilipitra
MpanoratraMahmud El Shafey
Voadika ny 16 Febroary 2017 1:57 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, عربي, Español, Ελληνικά, 简体中文, 繁體中文, English
Vehivavy iray ao amin'ny Maoske alibatiran'i Mohamed Ali ao Kairo. Loharano: WikiCommons.
Sambany teo amin'ny tantara, hahazo alàlana hiakatra pilipitra ireo vehivavy mpananatra, mba hitory any amin'ireo maoske ao Ejipta, hoy ny nambaran'ny Ministera Ejiptiana misahana ny foto-pinoana.
Nambaran'i Gaber Tayei, talen'ny departemanta ara-pinoana ao amin'ny ministeran'ny foto-pinoana any Ejipta, fa 144 ireo vehivavy mpitari-pivavahana (imams) hiditra amin'io asa io, ao anatin'ny drafitra “fanavaozana” midadasika ataon'ny governemanta amin'ny resaka fitoriana fivavahana ao amin'ny firenena.
Amin'ny Martsa ireo vehivavy, izay ho mpirotsaka an-tsitrapo, no hanomboka hitory teny, ary hifantoka amin'ny “fanitsiana” ireo hevitra diso any anatin'ny “jurisprudence” islamika, indrindra fa momba ny olana mifandraika amin'ny vehivavy. Nanoratra ireo media ejiptiana hoe zara raha handray karama isambolana mitentina 120 livres ejiptiana ireny vehivavy ireny — mihoatra kely ny 7 dolara amerikàna.
Ireo mpananatra vaovao dia hahazo diplaoma avy amin'ny Oniversite Al-Azhar, toeram-pianarana ara-pinoana ambony indrindra ao Ejipta, miaraka amin'ny diplaoma “dawa” na ny fahazotoana amin'ny fivavahana, hoy Atoa Tayei tamin'ny Huffington Post Arabi.
Tany aloha dia namoaka didim-panjakana ny governemanta ejiptiana nanerena ireo imams rehetra ho tsy maintsy nahazo diplaoma avy amin'ilay toeram-pianarana ara-pivavahana tranainy indrindra sy ambony indrindra ao amin'ny firenena, ao anatin'ny hetsika goavana ho fampiraisana sy fanalefahana ny kabary ara-pinoana manerana ny firenena.
Tsy hanao afa-tsy ny hitory teny manolona ny vehivavy ireo vehivavy mpirotsaka an-tsitrapo vaovao ireo. Voazarazara ny maoske ao Ejipta, ny ampahany natao ho an'ny vehivavy dia mazàna no ery aoriana ery.
“Izay rehetra fanaon'ny lehilahy mpananatra no hataon'ireo vehivavy mpananatra ireo…saingy ho an'ny vondrom-behivavy”, hoy ny i Tayei nanamarika.
Nohazavainy fa andro roa isankerinandro ireo vehivavy mpananatra no manome fampianarana iresahana lohahevitra isankarazany. “Andiany voalohany” ihany ireto vehivavy 144 ireto, atsy aoriana dia ho hita manerana an'i Ejipta izy ireny”. Vinaina ho 55.000 ireo vehivavy mpananatra efa nahazo alàlana ao Ejipta amin'izao fotoana izao.
“Dingana lehibe mankany amin'ny fandrosoana izao, na dia taraiky ihany aza ny fisiany” hoy ny Dr. Amina Naseer, solombavambahoaka ao amin'ny parlemanta ejiptiana no sady profesora fahiny tao Al-Azhar.
“Tsy maintsy mizara sy mahazo tohana avy amin'ireo manampahefana rehetra ara-panjakana sy ara-pinoana manerana an'i Ejipta io hevitra io….Goavana ary mila faharetana ny asa,” hoy ny fanambaràny tamin'ny Huffington Post Arabi.
Tamin'ny 1996, hita tao Ejipta ny fametrahana vehivavy 19 “mpitaridia” teny amin'ireo maoske mba hamaly ireo fanontaniana momba ny finoana apetraky ny vehivavy, drafitra iray nijanona tsy nisy tohiny.
Tsara no nandrasain'ny maro ilay vaovao.
“Ho matianina amin'ny asany ireny vehivavy mpananatra ireny no sady hanampy amin'ny fanabeazana ny vehivavy ejiptiana, hiantoka ny tsy haha-rembin'ny finoana mahery fihetsika sy ny ideolojia navily làlana”, hoy i Shawki Abdullatif, sekretera lefitra fahiny nisahana ny Raharahan'ny Dawa tao amin'ny Ministera Ejiptiana misahana ny Foto-pinoana, tanatin'ny teniny notaterin'ny Al-Arabiya. “Feno vehivavy ny tantaran'ny finoana silamo, vehivavy izay nilaina ary tena mpanolotsaina hendry”, hoy izy nanampy.
Saingy nisy ihany koa ny fanatsiniana. Raha naneho hevitra tao amin'ny tranonkala ejiptiana Masr Al-Arabiya, tamim-pahamalinana ny Sheikh Mohamed Youssef Al-Gazar no niarahaba ny fahatongavan'ireo vehivavy mpananatra, saingy narahany fampitandremana hoe tsy tokony ho any amin'ny maoske no hanaovana izany.
Ny tohankeviny : “Tsaratsara kokoa ny mandefa ireny vehivavy ireny ho any amin'ny sekolin-jazavavy fa tsy any amin'ny maoske, mba tsy hamorona olana miaraka amin'ny imam”.
Nitranga teny anaty media sosialy ny fanoherana.
Tsy ananan'izy ireny ny fahafahana mijoro eny ambony pilipitra sy hitory amin'ny olona. Tokony hiverina handinika ny lalàna navoakany ny Ministeran'ny Foto-pinoana.
Ry Tampon'ny fahalalàna: any an-trano mitaiza ankizy no toeran'ny vehivavy
Vehivavy mpananatra sy Al-Azhar… tena mety ve ny hitorian'ireo vehivavy ?
Mpampiasa iray hafa ao amin'ny Twtter no nanomboka fakàna hevitra momba ilay hetsika:
Mifidiàna, omeo ny hevitrareo :
Taorian'ny fanambaran'izy ireo tao Ejipta, heverinareo ve fa ilaina any anaty maoske ireo vehivavy mpananatra ?
Eny : 46 %
Tsia : 54 %
Tsy naneho hevitra momba ilay fanambaràna ny Oniversite ejiptiana ao Al-Azhar. Tsy mitovy hevitra amin'ny governemanta ny rantsana ambony indrindra ara-pinoana ao Ejipta momba ny tontolon'ny ara-pinoana manerana ny firenena. Irian'ny governemanta tarihan'ny Filoha Abdelfattah El-Sissi, ny handraisan'ny Al-Azhar anjara mavitrika ao anatin'ilay “fanavaozana” ny kabary ara-pivavahana.
Tato anatin'ny fotona vitsivitsy, miady izay ho mpifehy ireo toriteny isaky ny zoma ireo andry roan'ny finoana ireo, nampanarahana ny fenitra amin'ny ady atao amin'ny fanaovana an-tendrony.